Araka ny efa notaterina teto, anjakan’ny gaboraraka tanteraka ny fitaterana eto amintsika, indrindra ny taxi-be. Azo adika ho toy izany ny jadona mampiakatra ny saran-dalana, tsy ampandrenesana mialoha ny mpanjifa. Iaraha-mahita ireny korontana anatiny ao anivon’ny UCTU ireny, ny fangatahan’ny mpikambana hialan’ny filohan’ny kaoperativa iray.
Ho an’ny fanjakana, tsy hita intsony tena andraikitra raisin’ny Antokon-draharaha mitantana ny fitaterana an-tanety (ATT), fa sao sanatria mionona amin’ny vola azo avy amin’ny fikarakaran’ny mpitatitra taratasy ao aminy.
Raha ampiakarina ambonimbony, eo koa ny didiko fe lehibe ataon’ny fitondrana foibe sy ny OMH, “ manondrotra ny vidin-tsolika”, satria voabaikon’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena.
Etsy ankilany, kamboty very reny ny mpanjifa, miaritra ny mafy, tsy maintsy mizaka ny vokatr’ireo ataon’ny fanjakana sy ny mpitatitra ireo. Kamboty tsy misy mpiahy, nefa tsy maintsy manefa sy manome ny tombombarotry ny mpitatitra sy mandoa ny hetram-panjakana. Mbola ho vesaran’ny vidim-bary efa tafakatra 2.100 Ar sahady ny kilao.
Ho avy ny fifidianana, tsy miasa loha amin’ireo ny mpilatsa-kofidina.